तिलिचो ताल जोड्ने सडक निर्माण शुरु | suryakhabar.com
नेपाल–चीन सम्बन्ध सागर झैँ गहिरो र सगरमाथा जस्तै उच्चः राष्ट्रपति भण्डारी
काङ्ग्रेसको चियापन समारोह आइतबार २.०० बजेदेखी
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनफीङको स्वागत/ सवारीसहित (फोटो फिचर)
मोदीको यो मार्मिक भिडियो जसले केही घण्टामा नै करोड लाईक र लाखौं कमेन्ट पायो (तस्विरहरुसहित)
काँग्रेसबाट विजयी अध्यक्ष तामाङको घोषणाः मृतकका परिवारलाई तत्काल २५ हजार दिन्छौं
Home प्रदेश गण्डकी प्रदेश तिलिचो ताल जोड्ने सडक निर्माण शुरु
तिलिचो ताल जोड्ने सडक निर्माण शुरु
on: June 20, 2019 In: गण्डकी प्रदेशTags: No Comments
ठिनी । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–५ ठिनी गाउँदेखि संसारको सबैभन्दा उच्चस्थानमा रहेको तिलिचो ताल जोड्ने सडक निर्माण शुरु भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले ठिनीदेखि तिलिचो ताल नजिकै पर्ने नमखुलेकसम्म सडक पु¥याउन ट्र्याक खोल्ने काम शुरु गरेको हो । यसअघि ठिनीदेखि ताङदुङसम्म साढे दुई किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको थियो ।
यसअघि निर्माण भएको सडकलाई स्तरोन्नति र नयाँ ट्र्याक निर्माण शुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनीयर ओमराज ढुङ्गानाले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष तीन किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य रहेकामा साढे एक किलोमिटरको ट्र्याक खोलेर भोटोभाङ भन्ने ठाउँसम्म सडक पुगेको हो ।
रु ५० लाख विनियोजित यो योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ । आगामी वर्ष पनि थप बजेट विनियोजन गरेर तिलिचो तालको आधार शिविरको रूपमा चिनिने नमखुलेकसम्म सडक पु¥याउने प्रदेश सांसद चन्द्रमोहन गौचनले बताए । ठिनीदेखि नमखुलेक पुग्न अहिले चार घण्टा हिँड्नुपर्छ । सडक पुगेपछि यात्राअवधि एक देखि डेढ घण्टामा छोटिने छ । नमखुलेकदेखि तिलिचो ताल पुग्न तीन घण्टा र तालबाट नमखुलेक फर्कन दुई घण्टा लाग्छ । अहिले ठिनीदेखि दुई दिन पैदल हिँडेर तिलिचो ताल पुग्न सकिन्छ ।
सडक र यातायात सुविधा भएपछि एकै दिनमा आवतजावत गर्न सक्नेछन् । आवतजावत सहज हुने र पर्यटक आगमन बढ्ने वडाध्यक्ष वीरेन्द्र थकालीले बताए । मुस्ताङ हुँदै तिलिचो ताल जोड्ने सडक छोटो दूरीको हुने जनाइएको छ । मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकामा पर्ने तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि चार हजार ९१९ मिटर उचाइमा छ । मुक्तिनाथ, तिलिचो, नीलगिरिलगायत हिमालको फेदीमा रहेको तिलिचो ताल पछिल्लो समय पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ ।
धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या
यसरी कुर्दै छन् कतारमा मृत्यु भएका श्रीमान्को शव !
यात्रुको गुनासो पछि ट्राफिकले गर्यो बढी भाडा लिने चालकलाई कारवाही
असिनाबाट धानबालीमा ७५ लाखको क्षति
दशैंमा रु दुई करोड ५० लाखको खसीबोका बिक्री
झापाको दुर्गापुरमा सन्ध्याकालिन कविता, कविहरुले यसरी तताए माहौल
मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति ‘सी’बीच शिखर सम्मेलनका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने सहमती
रक्सीले मातेर सभामुख महराद्वारा स्नेहामाथी बलात्कार, प्रहरीले वास्तै गरेन !
चलचित्र कलाकार सङ्घ दशैं भेटघाटः अक्षय कोषका लागि रकम हस्तान्तरण
थारु चलचित्र ‘भुरभुरा रहर’ को ‘च्यारिटी सो’ प्रदर्शन
गीतकार ज्ञानु राजबंशीको देशभक्ति गीत पागल सार्वजनिक भिडियो
निशान र मेलिनाको हावा चल्यो सार्वजनीकः वर्षा र अर्जुनको अभिनय
गायिका मेनुका राईको आवाजमा ” भुटेको मकैः भिडियो सहित
आँखा उपचार सेवा शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित, गाँउमा जनताप्रति बेवास्ता
सुँगुरको मासु खाँदा दुई कैदीको मृत्यु, दुईजना सिकिस्त
मान्छेको शरीर एकदिन खरानी भएर जान्छ, कसैले संसार देखोस् भनी आँखा दान गरेँः भुर्तेल
५ असार २०७६, बिहीबार